Yakazara CCNP Certification Course Guide
Sei ichange iri pfungwa yakanaka yokuti munhu awane CCNP?
Nei CCNA inofanirwa kuCCNP Certification?
Cisco Certified Network Professional (CCNP) inomanikidza huwandu hwekugadziriswa kubva kuCisco. Izvo zvakashandurwa zvakashandurwa kuva chivimbiso chinokosha munyika yekambani maererano nehutungamiri hutungamiri. Nokunyora chiziviso ichi tariro inogona kukonzera maitiro ake ehurongwa hutungamiri uye inoita kuti ive yakakwanisa kushanda pakati pekuunganidzwa kwevanyanzvi vanogona kugadzirisa nyaya dzinotambudza muhurongwa hwekutonga. Tarisiro inofanirwa kunge iine CCNA R & S yakakodzera kuti iwane chirongwa ichi chekudzidziswa, uye gore re1 richibatanidzwa muhutungamiri hwehutori huchava humwe hunodiwa hunoona.
Kana iwe unofarira ku Networking, CCNP-CCNA ndiyo yakanakisisa yekudzidza kuronga. Izvo zvakakwana kune vadzidzisi veIt uye vheji yepamusoro vavakadzi vanoda kutsvaga basa ravo muhurongwa hwehutungamiri mundima. (CCNP) Kuendesa mberi nekuchinja kwechirongwa kunobvumira kukwanisa kuronga, kugadzirisa, kusimbisa nekutsvaga zvirongwa zvekutengeserana kwenzvimbo dzakapoteredza uye dzakapoteredza uye kushanda pamwe chete nevanyanzvi pakugadzirisa hurongwa hwekuchengeteka. ICCP ndiyo yakakodzera kune avo vasiri pasi pegore rimwe remasangano ekugadzirisa masangano avo vakagadzirirwa kuti vagadzirise maitiro avo uye kushanda zvisina kufanira pane zvakaoma zvirongwa.
CCNA inosanganisira pfungwa dzinokosha muhutungamiri hutungamiri. Iwe unofanirwa kuziva nezvezvinhu zvakakosha zvehurongwa hwehutungamiri usati waedza CCNP certification test. Mushure mekubereka chibereko cheCNNP yekudzidzisa, iwe uchava nekwanisi yekuita mabasa akasiyana-siyana, somuenzaniso, kuronga, kupa uye kutsvakurudza WAN neLAN.
ICCP inozogona kugonesa kukwanisa kwekudzivirira kuita, kuronga, kutarisa uye kuongorora nyaya dziri pedyo nepamakamuri enyika. Kuti uite iyo dzidzo, zvinokosha kuti urege kuva nenguva isiri nguva yekutonga kusangana. Vaya vanogona kupedzisa iyo dzidzo vakaita sekune ikozvino vakaratidza simba ravo rokuzadza sevadzidzisi vehutungamiri, vadzidzisi vezvikwata, vanoronga vashandi uye vashandisi vehurongwa.
Kudzidziswa kwakakodzera Network Specialists, Network Engineers, Network Administrators, Network Support Specialists, System Engineers, Network Administrators, System Integrator uye Network Consultants. Usati waita dzidzo iyi, iwe unoda kuziva Networking Technologies, CCNA uye zvakare unodzidza zvakakosha nezvehutungamiri hwehurongwa. Kudzidza kweTCP / IP kunotarisirwa, uye gore re 1 kupinda muhutungamiri hwehutori richava rimwezve ruzivo.
Kuva neCCNP certification zvechokwadi kunoratidza huwandu hwenzvimbo mukutonga kwekutsinhanisa uye kutungamirira, sekutaura kune zvimwe zvose. Apo iwe uchitsvaka basa kune wekupedzisira muchengeti, musangano wekubatanidza muCisco unoita mhinduro iyi isinganzwisisike. Izvo ndezvezvinangwa zvose uye zvinangwa zvinosungirwa kuwana chiziviso kuitira kuti ushande nemubatanidzwa kana kuti kuCisco. Zvakare, zvakare kunyanya kubatsirika pakubata nevatengi vemativi, zvakadai sechisimbiso.
Icho chiitiko chinobatsira zvinokurudzira kuti zvigadzikane zvakanyatsogadziriswa mumagadziriro ekutungamirira. Zvakare, inoshandura basa rekupararira kudzidza pamusoro pehutungamiri hutungamiri pamusoro pezvino.
Ichi chiyeuchidzo chichaita kuti iwe uve nehutano huri nani pane huripo mubhadharo unobhadharwa kwauri semuongorori. Izvo zvichakubatsirawo neunyanzvi hutungamiri hutungamiri pfungwa dzokuti sangano dzakasiyana-siyana dzinogadzirirwa kubhadhara. Iwe unogonawo kuenda kune imwe maire uye utora izwi rekuongorora chekuita iro richakupa simba rokutarisira zvose inzwi uye data mune chero mapoka ekutengesa.
Pakati pezvese, kune hutano hwakanaka hutano hwehutano hwakadzidziswa kusvika kune zvimwe zvinhu, somuenzaniso, kuisa, kuronga, kuita nekutsvaga kwehutano hwakasiyana-siyana hwehutano husina kunaka muLANs neWANs.
Kuwedzera imwezve kukoshesa kweyiyo yakasimbiswa ndiyo nzira yeCCNP kuchengeteka, iyo inowedzerawo pasi-yakarayirwa bazi reCisco ratsigirwa kuronga hunoziva. Vanhu vari kutsvaka iyi purogiramu yezvokuchengetedza vaizoona zvakawanda zvekushanda kwemabasa mumusika. Kunze kweizvozvo, CCNP Voice inowedzera chikamu chinokosha chetsika yakazara iyo inobatanidza nhamba huru yevanhu panyika.
CCNP R & S inomira pakati pevakanyanya kutarisana nehutachiona hwekugadziriswa kwemazuva ano. Dhigirisi yepamusoro uye kugamuchirwa kwekutora ruzivo kunokosha mukunyanyisa kwekutsvaga kwezvinhu zvitsva.
Pari zvino, apo kuchengetedzwa kweIndaneti zvinhu zvakaoma zvikuru kuchengetedzwa, kuwana chiziviso mumunda unoenzanisa kunogona kuunza vazhinji shots uye zvinogoneka. Icho chikuru chinotarisira kugadzirisa kuchengeteka. Paunowana chiziviso ichi, iwe unogona kuve muhutano hwekutsvaga paIndaneti unoziva uyo anokwanisa kubatsira misoro yebhizimisi, vanhu, nheyo nesangano kubva kune njodzi dzakatsamwa sevadzidzisi uye zvirwere.
Zvimwe kana zvishoma, mari uye kuzadzikiswa kwebasa zvinangwa zviviri zvinoshamisa kubva kune nyanzvi kusarudza iyi dzidzo. Pavanenge vachida kuzvidzora mumasangano ekugadzirisa masikati, ndizvo zvazviriwo nzira yakakwana. Icho chiri kuzadzisa kuziva kuti kutonga kwezvinhu zvakakosha zvakadini mumunhu. Nzvimbo yekuchengetedzwa kwepaIndaneti inzvimbo inonyanya kufungidzirwa iyo iri mukutsvaga kudiwa kweyanyanzvi.
Innovative Technology Solutions ndiyo mupiriri wepamusoro wekudzidzira mazano emakambani. Kudzidziswa kwakakura muhurongwa hwehutungamiri kunobvumira nyanzvi kuwedzera ruzivo rese uye unyanzvi hunokosha kune vanotengesa vanofarira.